သှယျဝိုကျသောနညျးဖွငျ့ လှူဒါနျးခွငျး – Shwe Naung
ဈေးဝယျသူတဈယောကျ ဆိုငျထဲဝငျလာပွီး မေးတယျ။
ငှကျပြောသီး ဘယျဈေးလဲ ..?
ဆိုငျရှငျက ပွနျဖွတေယျ …ငှကျပြောသီးက ငှဒေင်ျဂါး ၁၂ ပွား၊ ပနျးသီးက ၁ဝ ပွားပါ။အဲ့ဒီ အခြိနျမှာပဲ ဆိုငျထဲကိုအမြိုးသမီးတဈယောကျ ဝငျလာပွီးကြှနျမ ငှကျပြောသီးဝယျခငျြလို့ငှကျပြောသီး ဘယျဈေးလဲလို့ မေးပွနျတယျ။ဆိုငျရှငျက ပွနျဖွတေယျ။ငှကျပြောသီးက ငှဒေင်ျဂါး ၃ ပွား၊ပနျးသီးက ၂ ပွား ပါ။
ဒါကို ကွားတော့ပထမ ဝယျသူ အမြိုးသားကဒေါသထှကျနတေဲ့ အကွညျ့နဲ့ ဆိုငျရှငျကို ကွညျ့နတေယျ။အဲ့ဒါကို ရိပျစားမိတဲ့ ဆိုငျရှငျကပထမ ဝယျသူ အမြိုးသားကို ဟို အမြိုးသမီး မမွငျအောငျမကျြစတေ့ဈဖကျ မှိတျပွပွီး ခဏလေး စောငျ့ဖို့ ပွောတယျ။
အမြိုးသမီးက ဝယျခွမျးပွီးတော့ ပြျောရှငျစှာဆိုငျထဲကအထှကျမှာ – နှုတျကအို••• ဆိုငျရှငျကွီး ကြေးဇူးတငျပါတယျ။ကြှနျမ ကလေးတှေ ဒါတှကေို စားပွီးအရမျး ပြျောသှားကွလိမျ့မယျလို့ ပွောရငျး ထှကျသှားပါတယျ။အမြိုးသမီး ထှကျသှားတော့မှဆိုငျရှငျက ပထမ ဝယျသူကို ကြှနျတျော ခငျဗြားကို သကျသကျ ဈေးတငျပွီးရောငျးတာ မဟုတျပါဘူး။
ဒီအမြိုးသမီးက ••• ဖတဆိုး ကလေး ၄ ယောကျရဲ့မိခငျ•• မုဆိုးမ•• တဈယောကျပါ။ဒါပမေယျ့သူမက •• ဘယျသူ့ဆီကမှ ဘယျလို အကူအညီမြှ ယူလမေ့ရှိဘူး။ ကြှနျတျော သူ့ကို ကူညီဖို့ အမြားကွီး ကွိုးစားကွညျ့ပွီးပါပွီ..မအောငျမွငျဘူး။
အဲ့ဒါနဲ့ ကြှနျတျောလညျးနညျးလမျးတဈခု စဉျးစားမိသှားတယျ။ဒီအမြိုးသမီးဆိုငျမှာ ဘာပဲ•• လာဝယျ••လာဝယျအနညျးဆုံး ဈေးနှုနျးနဲ့ လြှော့ပွီးရောငျးပေးလိုကျမယျ။ အဲ့ဒါဆိုရငျ•••သူ့ကို ကူညီရာလညျးရောကျမယျပွီးတော့•• ဒီအမြိုးသမီးရဲ့ဘယျသူ့ရဲ့အကူအညီမှ မလိုဘူးဆိုတဲ့ယုံကွညျခကျြကိုလညျးမထိခိုကျတော့ဘူးပေါ့။
ပွီးတော့•• ဒီအမြိုးသမီးက တဈပတျလုံးမှာမှ တဈရကျပဲ လာတာ..သူမ လာတဲ့နဆေို့ရငျဆိုငျက ပိုပွီး ရောငျးရတယျ။အဲ့ဒီတော့မှ ပထမ ဝယျသူလညျး သဘောပေါကျသှားပွီးမကျြရညျတှေ စီးကလြာတယျ။တဈပါးသူကို ကူညီခွငျးရဲ့ အရသာကို ကူညီဖူးသူတှပေဲ သိပါတယျလို့ ပွောရငျး ဝယျခွမျးပွီး ပွနျသှားပါတော့တယျ။
ဒီအဖွဈအပကျြမှာ ဆိုငျရှငျ ပုဂ်ဂိုလျ ဟာအတုယူသငျ့တဲ့ သူပါ။တဈဖကျသားကိုကူညီလညျး ကူညီလိုကျတယျ။
သူဈေးလြှော့ပေးတာ (တနညျးအားဖွငျ့ သှယျဝိုကျသောနညျးနဲ့ ပေးကမျးလှူဒါနျးတာ)တဈဖကျသားက သိတောငျ မသိလိုကျပါဘူး။ကြှနျတျောတို့ အားလုံးလညျး ဒီလိုဆိုငျရှငျကို အတုယူပွီး လကျတှပွေု့လုပျနိုငျစှမျး ရှိသူတှေ ဖွဈကွပါစေ။
ဈေးဝယ်သူတစ်ယောက် ဆိုင်ထဲဝင်လာပြီး မေးတယ်။
ငှက်ပျောသီး ဘယ်ဈေးလဲ ..?
ဆိုင်ရှင်က ပြန်ဖြေတယ် …ငှက်ပျောသီးက ငွေဒင်္ဂါး ၁၂ ပြား၊ ပန်းသီးက ၁ဝ ပြားပါ။အဲ့ဒီ အချိန်မှာပဲ ဆိုင်ထဲကိုအမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဝင်လာပြီးကျွန်မ ငှက်ပျောသီးဝယ်ချင်လို့ငှက်ပျောသီး ဘယ်ဈေးလဲလို့ မေးပြန်တယ်။ဆိုင်ရှင်က ပြန်ဖြေတယ်။ငှက်ပျောသီးက ငွေဒင်္ဂါး ၃ ပြား၊ပန်းသီးက ၂ ပြား ပါ။
ဒါကို ကြားတော့ပထမ ဝယ်သူ အမျိုးသားကဒေါသထွက်နေတဲ့ အကြည့်နဲ့ ဆိုင်ရှင်ကို ကြည့်နေတယ်။အဲ့ဒါကို ရိပ်စားမိတဲ့ ဆိုင်ရှင်ကပထမ ဝယ်သူ အမျိုးသားကို ဟို အမျိုးသမီး မမြင်အောင်မျက်စေ့တစ်ဖက် မှိတ်ပြပြီး ခဏလေး စောင့်ဖို့ ပြောတယ်။
အမျိုးသမီးက ဝယ်ခြမ်းပြီးတော့ ပျော်ရွှင်စွာဆိုင်ထဲကအထွက်မှာ – နှုတ်ကအို••• ဆိုင်ရှင်ကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်မ ကလေးတွေ ဒါတွေကို စားပြီးအရမ်း ပျော်သွားကြလိမ့်မယ်လို့ ပြောရင်း ထွက်သွားပါတယ်။အမျိုးသမီး ထွက်သွားတော့မှဆိုင်ရှင်က ပထမ ဝယ်သူကို ကျွန်တော် ခင်ဗျားကို သက်သက် ဈေးတင်ပြီးရောင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီအမျိုးသမီးက ••• ဖတဆိုး ကလေး ၄ ယောက်ရဲ့မိခင်•• မုဆိုးမ•• တစ်ယောက်ပါ။ဒါပေမယ့်သူမက •• ဘယ်သူ့ဆီကမှ ဘယ်လို အကူအညီမျှ ယူလေ့မရှိဘူး။ ကျွန်တော် သူ့ကို ကူညီဖို့ အများကြီး ကြိုးစားကြည့်ပြီးပါပြီ..မအောင်မြင်ဘူး။
အဲ့ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်းနည်းလမ်းတစ်ခု စဉ်းစားမိသွားတယ်။ဒီအမျိုးသမီးဆိုင်မှာ ဘာပဲ•• လာဝယ်••လာဝယ်အနည်းဆုံး ဈေးနှုန်းနဲ့ လျှော့ပြီးရောင်းပေးလိုက်မယ်။ အဲ့ဒါဆိုရင်•••သူ့ကို ကူညီရာလည်းရောက်မယ်ပြီးတော့•• ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ဘယ်သူ့ရဲ့အကူအညီမှ မလိုဘူးဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုလည်းမထိခိုက်တော့ဘူးပေါ့။
ပြီးတော့•• ဒီအမျိုးသမီးက တစ်ပတ်လုံးမှာမှ တစ်ရက်ပဲ လာတာ..သူမ လာတဲ့နေ့ဆိုရင်ဆိုင်က ပိုပြီး ရောင်းရတယ်။အဲ့ဒီတော့မှ ပထမ ဝယ်သူလည်း သဘောပေါက်သွားပြီးမျက်ရည်တွေ စီးကျလာတယ်။တစ်ပါးသူကို ကူညီခြင်းရဲ့ အရသာကို ကူညီဖူးသူတွေပဲ သိပါတယ်လို့ ပြောရင်း ဝယ်ခြမ်းပြီး ပြန်သွားပါတော့တယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက်မှာ ဆိုင်ရှင် ပုဂ္ဂိုလ် ဟာအတုယူသင့်တဲ့ သူပါ။တစ်ဖက်သားကိုကူညီလည်း ကူညီလိုက်တယ်။
သူဈေးလျှော့ပေးတာ (တနည်းအားဖြင့် သွယ်ဝိုက်သောနည်းနဲ့ ပေးကမ်းလှူဒါန်းတာ)တစ်ဖက်သားက သိတောင် မသိလိုက်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ အားလုံးလည်း ဒီလိုဆိုင်ရှင်ကို အတုယူပြီး လက်တွေ့ပြုလုပ်နိုင်စွမ်း ရှိသူတွေ ဖြစ်ကြပါစေ။
စီးပှားတကျစသေျောလညျး အိမျတှငျးမှာ စိုကျမိရငျ လူကို ခိုကျတတျသညျ့ ဂမုနျးပငျ (၃) မြိုး